प्रोग्रेशिभ फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १८ पुस २०७६)
कम्पनीले पुस २८ गते वार्षिक साधारणसभा आव्हान गरेको छ । २३ औं वार्षिक साधारणसभा आव्हान गरेको कम्पनीले हालसम्म शेयरधनीहरुलाई लाभांश दिन सकेको छैन् । यस वर्ष पनि वार्षिक प्रतिवेदन पारित, लेखापरिक्षक नियुक्ती र मर्जर तथा प्राप्तिको प्रस्ताव मात्र सभाका लागि तय भएको हो । यस वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा कम्पनीले रू. ३० लाख ८१ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
गत वर्ष यो समयमा कम्पनीको खुद नाफा रू. १ करोड ७८ लाख २१ हजार थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नाफामा कमी आएको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ७९ करोड ७२ लाख ७५ हजार छ । जगेडा कोषमा पहिलो त्रैमाससम्म रू. ३ करोड १७ लाख ४२ हजार रहेको छ । बिहीवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ९७ कायम भएको छ ।
2020-01-03 - 474 view(s) - abhiyandaily